नेपालमा किन वर्षैभर गाईजात्रा भएको होला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः भाद्र ६, २०७३ - साप्ताहिक
भाद्र ६, २०७३
६ सय १ साँढे भएपछि गाईजात्रा त भैहाल्छ नि ।
देशमा ६ सय १ हास्यकलाकार छन् त्यसैले १ दिनको गाईजात्रा उनीहरूलाई अपुग भएर होला ।
गाईजात्रा हाम्रो सांस्कृतिक पर्व हो । हाम्रो देशमा ३ सय ६५ दिन नै गाईजात्रा भएको होइन बरु भद्रगोल, डामाडोल भएको हो ।
प्रदेशी कान्छा काले
यस्तो गाईजात्रा काठमाडौंमा मात्र सीमित छ, जहाँ राजनीतिजस्तो फोहोरी खेलका खेलाडीहरू गल्ली गल्लीमा भेटिन्छन् । त्यस्ता फुर्सदिलाले गाईजात्रा नगरेर के देशको विकास गरेर बस्छन् त ?
चाहिनेभन्दा बढी दिमाग भएर, जनता सोझा भएर ।
अरू देशमा गाईजात्रा नहुने भएर ।
गाईजात्रा देखाउने भन्दा हेर्न रुचाउनेहरूको संख्या बढी भएर ।
दुनियाँलाई हँसाउने कलाकारहरूको संख्या ६ सय १ भएर ।
हैट्, नेपालमा कहाँ हुन्छ हौ त्यस्तो ? हामी पनि यतैको हो तर एक दिन पनि गाईजात्रा देखेको छैन ।
कलाकार धेरै छन् । सबैको पालो आउँदा वर्ष दिन त लागिहाल्छ नि ।
सबै जोकर जस्ता नेता भएर ।
गाईजात्रे कलाकारले भन्दा बढी जात्रा हाम्रो देशका नेताहरूले गरेर ।
देशका नेतादेखि कर्मचारीहरूमा दूर दृष्टि छैन । राजनीतिलाई सेवा नसम्झी कमाइ खाने भाँडो बनाउँछन्, जुन क्रियाकलाप गाईजात्राझंै लाग्छ ।
गाईजात्राको अनर्थ भो । यो त मृत आत्माको चिर शान्तिका लागि मनाइने पवित्र पर्व हो ।
नेता, शिक्षक, पत्रकार, कर्मचारी, मजदुर, विद्यार्थी सबै राजनीतिज्ञ हुन चाहन्छन् । त्यसैले गाइजात्रा लागेको होला ।
नेताहरू गोरु र जनता सोझो गाई भएर ।
३ सय ६६ दिन नहुने भएकाले ।
अभिनेताभन्दा नेता धेरै भएकाले ।
हाम्रो नेपाल संस्कृतिलाई अलि बढी पछ्याउने देश भएर हो कि ?
गाईजात्रा होइन, गोरुजात्रा भन्दा उचित होला ?
यसका लागि योग्य कलाकारहरूका रूपमा प्रशस्त नेता नेपालमा भएकाले ।
नेता हुन कुनै शैक्षिक योग्यता नचाहिने, सांसद–मन्त्री हुन पनि कुनै शैक्षिक योग्यता नचाहिने । हुँदा–हुँदा बज्रस्वाँठ पनि राजनैतिक सल्लाहकार हुन पाउने भएपछि जनताले मात्र किन पढ्नु ? अब साक्षरले लोकसेवा आयोगको अधिकृत परीक्षा लड्न पाउनुपर्‍यो ।
गाईजात्रा हेर्न रुचाउने नेपालीहरू बुख्याँचाको (राजनीतिकर्मी) चाकरी र प्रोत्साहनमा अग्रसर हुन्छन् अनि ३ सय ६५ दिन नै किन गाईजात्रा नहोस् ?
सबै गाईजात्रे कलाकार (नेता) भएर ।
प्रकाशित :भाद्र ६, २०७३
छोराछोरी आफ्ना र श्रीमती अर्काकी राम्रा लाग्छन् किन भनिएको होला ?
क्यानाडाबाट आयो 'कोहि त होला...'
अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सब नेपालमा